Gbasara Baịbụl: Gịnị Mere I Ji Kwesị Inwe Mmasị n’Ihe E Dere na Baịbụl?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị Mere I Ji Kwesị Inwe Mmasị n’Ihe E Dere na Baịbụl?
Baịbụl bụ akwụkwọ a kacha mara amara n’ụwa niile. Ọ̀ bụ n’ihi gịnị? Otu ihe kpatara ya bụ na ihe e dere na Baịbụl gbasara anyị niile. Baịbụl kọọrọ anyị akụkọ ụmụ mmadụ ndị dịrị ndụ n’ụwa, otú ha na ibe ha si mekọrịta ihe nakwa otú ha na Chineke si mekọrịta ihe. Ihe ndị ahụ Baịbụl kọrọ na-akụziri anyị ọtụtụ ihe. Otú e si dee ha dị mfe nghọta nke mere na e nwere ike ịsụgharị ha n’ọtụtụ asụsụ, ndị mmadụ aghọta ha n’agbanyeghị ebe ha bi ma ọ bụ mgbe ha dịrị ndụ. Ihe ọzọ bụ na ihe niile Baịbụl kwuru na-abara anyị uru.
Nke ka nke bụ na Baịbụl sịrị na ya bụ akwụkwọ si n’aka Chineke nke kwuru gbasara Chineke. Ọ gwara anyị aha Chineke, ụdị onye ọ bụ, na ihe o bu n’obi kee ụwa na ụmụ mmadụ. Ihe ahụ Chineke bu n’obi agbanwebeghị, ọ gakwanụghị agbanwe. Baịbụl gwakwara anyị na o teela Setan mawara Jehova aka, gwakwa anyị otú Jehova ga-esi akwụsị ihe ọjọọ niile ma gosi na Setan bụ onye ụgha. N’ihi ya, ọ bụrụ na anyị ana-agụ Baịbụl maka na anyị chọrọ ịmụta ihe n’aka Chineke, anyị ga-enwe okwukwe na olileanya.
Ọ bụ na Baịbụl ka anyị nwere ike ịmata ọtụtụ ihe ọ na-enweghị ebe ọzọ anyị ga-esi amata ha. Dị ka ihe atụ, Baịbụl gwara anyị nke bụ́ eziokwu n’ihe ndị a:
Otú anyị si malite ịdị ndụ n’ụwa na ihe mere anyị ji ata ahụhụ
Ihe Chineke merela ka o nwee ike napụta ụmụ mmadụ
Ihe Jizọs meerela anyị
Otú ihe ga-adị n’ụwa n’ọdịnihu nakwa otú ihe ga-adịrị ụmụ mmadụ n’ọdịnihu
Ọ́ gaghị adị mma ka i lebatụ anya n’ihe ndị e kwuru na peeji ndị na-esonụ ma hụ ihe Baịbụl na-akụziri anyị?
IHE NDỊ I KWESỊRỊ ỊMA GBASARA BAỊBỤL
Isiokwu ya: Otú Alaeze Chineke nke dị n’eluigwe ga-esi eme ka ezi omume na udo dịghachi n’ụwa
Akwụkwọ ole dị na ya: E dere akwụkwọ iri atọ na itoolu n’asụsụ Hibru (e nwekwara ebe ole na ole e dere n’asụsụ Arameik) nakwa akwụkwọ iri abụọ na asaa n’asụsụ Grik
Oge o were: O were ihe dị ka mmadụ iri anọ dere ya ihe karịrị otu puku afọ na narị afọ isii tupu ha edechaa ya. Ha malitere ide ya n’afọ 1513 Tupu Oge Ndị Kraịst, dechaa ya n’ihe dị ka afọ 98 Oge Ndị Kraịst
Asụsụ ole a sụgharịrịla ya: A sụgharịala akwụkwọ niile dị na ya nakwa akwụkwọ ụfọdụ dị na ya n’ihe karịrị puku asụsụ abụọ na narị ise
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Mere I Ji Kwesị Inwe Mmasị n’Ihe E Dere na Baịbụl?
BỊARUO CHINEKE NSO “Jehova Gbaghaara Unu Kpamkpam”
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị?
ỤLỌ NCHE Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị?